स्वास्थ्य Archives - देश विकास डटकम
हेलिकप्टरबाट महिलाको उद्धार गरियो
२८, असोज २०७६ – मृत शिशुलाई जन्म दिएर थला पर्नुभएकी रुकुमपूर्व पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१ मैकोटकी ३१ वर्षीया सरलमाया पुनको उद्धार गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपूर्व र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा हेलिकप्टरबाट सोमबार पोखरा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । यही असोज १७ गते स्वास्थ्यचौकी मैकोटमा मृत शिशुको जन्म
१३ असोज २०७६ । नेपालीको पर्व दशैँ, तिहारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रवाह गर्ने भएका छन् । यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दशैं र तिहारका सार्वजनिक बिदाका समयमा पनि स्वास्थ्य सेवा यथावत् राख्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत जगतप्रसाद भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय निकायका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका,
स्क्रब टाइफस के हो त ? यो रोग कसरी लाग्छ, अनि कसरी बच्न सकिन्छ ? जानीराखौं ।
६ असोज २०७६, सोमबार । तपाईँ खेतबारीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? आफ्ना घर वरिपरिका झाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ ? अथवा मुसाका बासस्थानतिर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला । पछिल्लो समय मुख्य रूपमा मुसाको टोकाइ र सङ्क्रमणबाट मानवमा लाग्ने स्क्रब टाइफस नामक रोगको सङ्क्रमण अधिकांश जिल्लामा फैलिएको छ । कीटजन्य रोग व्यवस्थापन गर्ने
हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि बझाङ जिल्लाका हलियाको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएन ।
२३ भदौ २०७६, सोमबार । विसं २०६५ साल भदौ २० गते सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि बझाङ जिल्लाका हलियाको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सरकारले नेपाल हलियामुक्त भयो भनेर घोषणा गरे पनि सुदूर पश्चिमको बझाङका हलियाहरु भने अझै हलियाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारकाे हलियामुक्त घोषणा
धादिङको थाक्रे गाउँ पालिकाका मा समृद्धिका लागि सहयात्रा रेडियो कार्यक्रम को शुभारम्भ ।
२१ भदौ, २०७६, थाक्रे- धादिङको थाक्रे गाउपालिका ६ महदेवबेशीमा शुक्रबार समृद्धिका लागि सहयात्रा रेडियो कार्यक्रम को शुभारम्भ गरिएको छ। समृद्ध थाक्रे ,सुखी थाक्रे वासी भन्ने नाराका साथ गाउँ पालिकाका निति,कार्यक्रम तथा योजना ,बजेट एबम कर्यान्वयनको अबस्था का बारेमा जनताका जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव एवं धारणा लगायतका विषय समेटिने जनतासंग अध्यक्ष रेडियो कार्यक्रम एक कार्यक्रम विच शुभारम्भ गरिएको
हेपाटाइटिस बी नियन्त्रण गरेकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा नेपाललाई बधाई
१८ भदौ २०७६, बुधबार । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हेपाटाइटिस बी नियन्त्रण गर्न सफल भएकोमा नेपाललाई बधाई दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्र हेर्ने भारतको नयाँदिल्ली स्थित कार्यालय (सेरो) को क्षेत्रीय बैठकमा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले यो मंगलबार सम्मान ग्रहण गरेका हुन्। नेपालको खोप कार्यक्रम मार्फत् हेपाटाइटिस बी नियन्त्रण गर्न सफल
दैनिक एक कचौरा दही खाँदा हुने १० फाइदाहरु केके छन् ?
दही तपाईं हामीमध्ये धेरैको फेवरेट खानेकुरा ! यतिमात्रै नभएर दहीको महत्व धेरै छ । कुनै पनि शुभकाम वा यात्रा अघि दही सगुनको रुपमा खुवाउने प्रचलन छ, यसले सो काममा सफलता दिलाउने र शुभ हुने मान्यता रहिआएको छ । यतिमात्रै नभएर दही स्वास्थ्यका लागि पनि बहुउपयोगी छ । यसमा केही यस्ता रासायनिक पदार्थ हुन्छन्, जसका कारण
कोकाकोला पिउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् १० देखि ६० मिनेटभित्र यसको असर
एक क्यान कोक खाएको एक घण्टाभित्र तपाईको शरीरमा के कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ भनेर एउटा इन्फोग्राफिकमा देखाईएको छ । अमेरिकामा बस्दै आएका एक जना डाक्टरले चलाएको ट्रुथ थ्यौरी भन्ने ब्लगले त्यस्तो चित्रलाई संकलन गरेको हो । यो चित्रमा ६० मिनेटभित्र सात चरणमा हामीले पिएको पेय पदार्थ टुक्रिन्छ भनेर देखाईएको छ । १. पहिलो १० मिनेटमा तपाईको